Vagabond – Gold Channel Movies
ချွဲဂန်ချီနဲ့ ဒမ်ယိုဝူးတို့ရဲ့ ?Gu Family Book – 2013 ? အပြီး6နှစ်ကြာ ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာ တဖန် ပြန်လည်ဆုံဆည်းမှုဖြစ်တဲ့ ” Vagabond ” ဆိုတဲ့ အမိုက်စား စပိုင် အက်ရှင် Drama လေး အကြောင်း မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် . .
ဇာတ်လမ်းလေး အကြောင်းကတော့ . . .
? Cha Dal-Gun ( Lee Seung Gi )
~~ ချာဒယ်ဂွန်း (Lee Seung Gi)️ ဟာ ကိုယ်ခံပညာရပ်အမျိုးမျိုးမှာ ခါးပတ်နက်အဆင့်ပေါင်း ၁၈ ခုလောက်ရထားပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်မှုလွန်ကဲကာ အမိန့်မနာခံတတ်သော စတန့်သမားတစ်ယောက် ? သူ့ရဲ့စိတ်ကူးအိပ်မက်ကတော့ ကမ႓ာကျော် အက်ရှင် သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက် ဖြစ်ဖို့ပါတဲ့~~ မထင်မှတ်ဘဲ ထူးဆန်းတဲ့လေယာဉ်ပျက်ကျမှုတစ်ခုမှာ တစ်ဦးတည်သော တူလေးကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီး အသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့သူဟာ ဒီမတော်တဆမှုရဲ့နောက်ကွယ်က အမှန်တရားကို စုံစမ်းရင်း နိုင်ငံ့အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတွေကိုပါ တူးဆွရမယ့်သူ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် . . .
?Go Hae-Ri ( Bae Suzy )
~~ NIS agent ဂိုဟယ်ရီ (Suzy) က ဖခင်သေဆုံးပြီးတဲ့အနောက် ရှုပ်ထွေးလှတဲ့လောကအကြောင်း ဘာမှမသိသေးတဲ့ မောင်ငယ်နဲ့ မိခင်ကို စောင့်ရှောက်ဖို့အတွက် အဆင့်ရ အစိုးရဝန်ထမ်းဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကြိုးစားနေသူပါ ~ သူမ လုပ်ချင်ခဲ့တာက White agent (NIS agent အဖြစ်ပေါ်ပေါ်တင်တင် လုပ်ကိုင်နိုင်သူ) ဖြစ်ပေမဲ့လည်း အရှုပ်အထွေးကွင်းဆက်တွေကို လိုက်ရမဲ့ Black agent (ကိုယ့်သရုပ်အမှန်ကို ဖုံးကွယ်ထားပြီး သူလျှိုလုပ်ထောက်လှမ်းရမဲ့ NIS agent) သာဖြစ်လာခဲ့ရသူ . . .
?Ki Tae-Woong ( Shin Sung Rok )
~~ ဉာဏ်အရမ်းကောင်းပြီး အလုပ်ကိုပဲလုပ်နေတတ်တဲ့ NIS အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ကီထယ်ဝုန်း ( Shin Sung Rok ) ~ သူကိုင်တွယ်ရတဲ့ အမှုတွဲတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကိစ္စတွေကို ဘက်မလိုက်တတ်ပဲ ပြတ်သားပေမယ့် သူရဲ့ အေးစက်တဲ့ အပြင်ပန်းသဏ္ဍန်ရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ပြင်းပြ (စိတ်အားထက်သန်) လွန်းတဲ့ ဗီဇတစ်ခုလည်း ရှိနေသူအဖြစ် ရှင်းဆောင်းယော့တို့ အဓိက ပါဝင်ထားတဲ့ . . .
?”Vagabond” ဇာတ်လမ်းတွဲဟာ သာမန်နိုင်ငံသားတစ်ယောက်က ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာ လေယာဉ်ပျက်ကျမှုမှာ ပါဝင်ခဲ့ပြီးမှ မမျှော်လင့်ဘဲ နိုင်ငံရဲ့ အတွင်းကျကျ အကျင့်ပျက် ခြစားမှုတွေကို လိုက်လံစုံစမ်းဖို့ဖြစ်လာပုံကို ရိုက်ကူးပုံဖေါ်ပြသသွားမှာပါတဲ့ လီဆွန်းဂီရဲ့ အက်ရှင်စွမ်းရည်တွေကိုတီးခေါက်ကြည့်ရင်း ဆူဇီကိုလည်း NIS အေးဂျင့် တစ်ယောက်အဖြစ် မြင်ရမယ့် သဲထိပ်ရင်ဖို စပိုင်အက်ရှင် ဇာတ်ကားမျိုးပါ . . ?
? ဒါ့ အပြင် ဒီဇာတ်လမ်းတွဲကို ဝမ် 25 ဘီလီယံ အကုန်ကျခံထားပြီး ကိုရီးယားတင်မက မော်ရိုကို ( မြောက်အာဖရိက) နဲ့ ပေါ်တူဂီ နိုင်ငံတွေရဲ့ တစ်ကယ့် အထင်ကရနေရာတွေ မှာသွားရောက်ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်လို့ ကိုရီးယားရဲ့ အရှေ့တိုင်းအလှတရားနဲ့မတူတဲ့ ရှုမျှော်ခင်းတွေ အဆောက်အဦး အလှတရားတွေ ကို ခံစားရင်းလှပတဲ့ ရိုက်ချက် အဆန်းတွေကို မြင်တွေ့ရမှာပါ ။?
? Vagabond ဇာတ်ကားကို စက်တင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့ကစလို့ အပါတ်စဉ် သောကြာနဲ့ စနေနေ့ည 10 နာရီမှာ SBS Korea တင်မက Netflix ကနေ Worldwide နိုင်ငံ 190 တို့မှာပါ ထုတ်လွှင့်သွားပြသသွားမှာ ဖြစ်ပြီး အပိုင္း ၁၆ ပိုင္း ပါဝင္မွာျဖစ္ပါတယ္
Review credited to Lee Seung Gi Myanmar Fans
Bhome Myat ZawSeptember 24, 2019Reply
I like that series.Please Go On. Korean Republic was made me always enjoy and entertainment .
Felix KhamSeptember 28, 2019Reply
EP3ma ya thay bu lar??
AXIZOctober 6, 2019Reply
Too late no EPISODE (SAD)
ThinzarSeptember 29, 2019Reply
Waiting for Melting Me Softly 날녹여주오 ?
TheinooApril 3, 2020Reply
WPKSeptember 29, 2019Reply
Yan Naing WinOctober 29, 2019Reply
Bro ဒီကားမွာေလ ေမာ္စကို လိုေျပာတဲ့ေနရာမွာ ျမန္မာစာတန္းထိုးလား ေျပာျပေပးပါလား bro
gcmoviesOctober 29, 2019Reply
KlayOctober 2, 2019Reply
AnonyOctober 3, 2019Reply
Flower Crew ကို အခု site မှာရှာမတွေ့တော့လို့ … FB ကလည်း လင့်ပျက်ထားတော့ … ဒီကနေ တိုက်ရိုက် ဒေါင်းလို့ရအောင် တင်ပေးပါအုံး admin တို့ …
LaemoeOctober 5, 2019Reply
KaungNovember 7, 2019Reply
14 မရသေးဘူး လား ခင်ဗျ?
LeeOctober 8, 2019Reply
Nga HeinOctober 6, 2019Reply
GC plz 1080p nae kyi chin lox GC mar tin tar wait nay par tal pleaseeeeeee!
ThinzarOctober 6, 2019Reply
Waiting Ep5& 6
FHD nae GC ka tin tr pl kyi chin loh wait nay pr tl ☹️
WPKOctober 12, 2019Reply
UpaingJune 28, 2020Reply
miracleOctober 14, 2019Reply
အပိုင်း ၈ လေးစောင့်နေပါတယ်နော်
MyathtutOctober 19, 2019Reply
Channelmyanmar မှာ အပိုင်း ၉ ထွက်နေပြီ
MiracleOctober 19, 2019Reply
အပိုင်း ၉ ?
MiracleOctober 20, 2019Reply
MiracleOctober 21, 2019Reply
အပိုင်း ၉ ၁၀
Kaung Myat LwinMarch 21, 2020Reply
စိတ်မရှည်​တော့ဘူးOctober 22, 2019Reply
အပိုင်း ၉ နဲ့ ၁၀ ကို
Series ပြီး ပြီး ၁နှစ်​လောက်​နေမှတင်ပါလား
Yu NgeOctober 22, 2019Reply
Please upload Episode9& 10! T_T I’m waiting too long! T_T
Yell Yint AungOctober 22, 2019Reply
MiracleOctober 22, 2019Reply
Episode9and 10 please
Grim ReaperOctober 23, 2019Reply
Adim? , Is he dead? ??
MiracleOctober 24, 2019Reply
အပိုင်း ၉ ၁၀ တင်ပေးပါ တော့
TinaOctober 24, 2019Reply
Where have you been? Please upload FHD episode9and 10.
AungOctober 25, 2019Reply
10 ka link ma pr woo bya
Yan Naing WinOctober 31, 2019Reply
thureinNovember 2, 2019Reply
MinkutaNovember 2, 2019Reply
Kyaw Kyaw HtikeNovember 3, 2019Reply
အပိုင္း ၁၃ ေလးတင္ေပးရင္ေကာင္းမယ္
thureinNovember 4, 2019Reply
အပိုင္း ၁၄ တင္ေပးပါလား ေစာင့္ေနပါတယ္
Bhome Myat ZawNovember 5, 2019Reply
Why late of ending Episode? As the same matter of LATE ,when Arthdal Chronicles Episode(18) Ending. Why make me feel of no patient? But I wish to you , Always successful what u want . Your the best.
gcmoviesNovember 5, 2019Reply
ဒီအပတ်က ၁၃ တစ်ပိုင်းပဲ လွှင့်ပါတယ်
14 မရသေးဘူး လား ခင်ဗျ
thu reinNovember 15, 2019Reply
Sai thaw han htooNovember 16, 2019Reply
Episode 15 မထ ြက္ေသးဘူးလားခင္ဗ်
KaungNovember 17, 2019Reply
YunaNovember 17, 2019Reply
HninNovember 20, 2019Reply
15 16 ကမထွက်တော့ဘူးလားဗျို့
miniNovember 23, 2019Reply
thu reinNovember 23, 2019Reply
StellaDecember 22, 2019Reply
Barely lethalဆိုတဲ့ကားလေးတင်ပေးလို့ရမလားမသိဘူး၊2015မှာထွက်တာပါ၊အဲ့ကားမှာhailee steingeldပါပါတယ်
Myat NOeJanuary 3, 2020Reply
16 episode is last final ??? SS2 shi tay tar lr ?
ွSteve_MinMarch 13, 2020Reply
16 episode is last final ??? SS2 shi tay tar lr ?..ဇာတ္သိမ္းျပီးလားခင္ဗ်ာ….ထပ္ျပီေတာ့ မထြက္ေတာ့ဘူးလား
gcmoviesMarch 14, 2020Reply
Nay LinApril 13, 2020Reply
Season2please . The move is still not end yet.
htetwaiyanApril 23, 2020Reply
Min SawJune 6, 2020Reply
NandaJuly 4, 2020Reply
Ep2&3are the same, why Sir?